अन्तर्वार्ता/विचार विहीबार, मंसिर १९, २०७६
सरकारलाई यो वर्षदेखि सरकारीस्तरबाटै महिला हिंसा विरुद्धकाे १६ दिने अभियान चलाउन निर्देशन दिएको प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पाल भन्छिन्, “महिला हिंसा रोक्न पुरुषलाई बुझाउन जरूरी छ।”
महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सरकारी स्तरबाटै गराउन निर्देशन दिनुको कारण के हो ?
पहिला विभिन्न संघसंस्था र महिला सङ्गठनले यो अभियान गर्थे । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समिति मार्फत सरकारी तवरबाटै अभियान गर्न निर्देशन दिएपछि यो वर्षबाट सातै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । अभियानको प्रभावकारिता बढेको छ । महिलामाथि हुने हिंसाबारे स्थानीय तहसम्म जनचेतना पुगेको छ।
यस बाहेक महिला हिंसा रोक्न समितिले के–के काम गरिरहेको छ ?
हामी कार्यकारी निकाय होइनौं । हाम्रो काम राज्यका नीतिहरुको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने र ऐनमाथि छलफल गर्ने हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई यस वर्ष महिला हिंसा अन्त्यको घोषणा गर्न निर्देशन दियौं । उहाँहरुले अन्त्य नै भएको घोषणा गर्न सम्भव नभएकाले त्यस विरुद्ध अभियान गर्ने बताउनुभयो । यसलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
महिला नेतृहरु नै महिलामाथि हुने हिंसाबारे मौन बस्ने गरेको आरोप छ नि ?
महिलामाथि भएका कतिपय हिंसाका घटना लुकाइएको भए बाहिर ल्याएर पीडकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं । कसैले पनि आफूमाथि हुने अन्याय सहने कुरै हुँदैन ।
पुरुषवादले जकडिएको सोचमै समस्या छ । छोरीलाई घरबाहिर जानुहुँदैन भनेर सिकाउने बाबुआमाले किन छोरालाई त्यस्तो अर्ति दिंदैनन् ? महिलामाथि हिंसा गर्ने पुरुष नै हुनाले उनीहरुलाई बुझाउन जरुरी छ । अर्को कुरा मानिस शिक्षित र स्वस्थ भयो भने पनि हिंसाको दरमा कमी आउँछ ।
यसका लागि राज्यसँगै प्रत्येक व्यक्तिको भूमिका हुन्छ । प्रत्येक घरमा सचेतना फैलियो भने अभियानले सार्थकता पाउँछ । त्यसबाहेक महिलालाई सक्षम बनाउन कक्षा–१ देखि नै पाठ्यक्रम निर्धारण गरेर आत्मरक्षाको अभ्यास गराउनुपर्छ । यसले आत्मबल बढाउँछ ।